PEACEFUL PA: May 2012
စစ်မှန်တဲ့ အပြုအမူတွေဟာ စိတ်နှလုံးထဲက လာပါတယ်။ ကြင်နာတဲ့စကားဟာ ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားထဲမှ လာပါတယ်။ အပြုအမူ ယဉ်ကျေးနေပေမယ့် သူတပါးကို ညဉ်းတွား အပြစ်တင်လိုက်တာနဲ့ ယဉ်ကျေးတာတွေဟာ အတုအယောင် ဖြစ်တာကို ပြသနေပါတယ်။
အစားအစာ စားတဲ့အခါ ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးစကား အမြဲဆိုပါ။ ပြင်ဆင်ကျွေးမွေးသူကိုလည်း ကျေးဇူးစကား ပြောပါ။
သူတပါးကို စိတ်ကြည်နူးစေခြင်းဟာ စိတ်ကောင်းရှိကြောင်း ပြနေပါတယ်။ စားသောက်ရာမှာ ကိုယ့်အလို၊ ကိုယ့်ဆန္ဓကို ဘေးဖယ်ထားပါ။ သူတပါးကို အလေးအနက်ထားပါ။ အချိန်မှီ ၀င်ထိုင်ပါ။
ကြည်နူးကြည်နူ စားသောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ရာ အဓိကက ငြိမ်သက်စွာ စားဖို့လိုပါတယ်။ နည်းနည်းစီသာ ကိုက်စားပါ။ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ၀ါးစားပါ။ သောက်ရေခွက်၊ ဇွန်းခက်ရင်းတို့ကို အသံမမြည်စေပါနဲ့။
ပန်းကန်ကို လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့အခါ ညာဖက်ကိုသာ ကမ်းရပါတယ်။ လူတိုင်း ကိုယ်စီမရကြသေးရင် မစားရသေးပါ။ စားနေတုန်းအစားအသောက် ထပ်လိုပါက အနီးဆုံး လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်သူကို တောင်းပါ။ သူတပါး ပန်ကန်ပေါ်မှ မဖြတ်ကျော်ရပါဘူး။ ထရပ်ပြီးလည်း လှမ်းကျော် မယူရပါဘူး။
လက်သုတ်ဝတ်များ - Napkins:
စားဖို့ အသင့်ဖြစ်တဲ့အခါ ဇွန်းခက်ရင်းရဲ့ ဘယ်ဖက်ရှိ လက်သုတ်ပ၀ါကို ယူပြီး၊ ပေါင်ပေါ်တင်ခင်းပါ။ ပုဝါသေးရင် အပြည့်ဖြန့်ခင်းပြီး၊ ပုဝါကြီးရင် ခေါက်ဖို့လိုပါတယ်။
ညာလက်နဲ့ ဓါးကို ကိုင်ပါ။ ဘယ်လက်က ခက်ရင်းနဲ့ အစားအစာကို ထောက်ထားရပါမယ်။ ( ဘယ်သန်များအတွက် မဟုတ်ပါ။ နဲနဲလောက် လှီးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါ၊ ဓါးကို ကိုယ့်ပန်းကန်ပေါ်မှာ တင်ပါ။ ပြီးမှ ညာလက်နဲ့ ဇွန်းခက်ရင်းကို ကိုင်ပြီး ဆက်စားပါ။ ဒါကို “Zig Zag” ဇစ်၊ ဇက်ကွေ့ (သို့မဟုတ်) “American Style” `အမေရိကန် စတိုင်လ်´ လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အချိုရည်ကို ဇွန်းရဲ့ ဘေးဖက်မှ ထည့်ယူပါ။ ဇွနးပေါ်က မထည့်ရပါ။ ဟင်းချိုရည်ကို ဇွန်းနဲ့ လှမ်းယူပါ။ ကလေးတွေက ဇွန်းနဲ့ မှုတ်သောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့သူ အားလုံးကတော့ အပေါ်ယံက အေးတဲ့ ဟင်းရည်ကို အသာကျော့ပြီး ခပ်သောက်သင့်ပါတယ်။ ကိုကိုး - လို ပူတဲ့ ဖျော်ရည်ကို သောက်ရင်တော့ တချက်၊ နှစ်ချက် အသာမွှေပါ။အပူရှိန်ကို သိနိုင်ဖို့ တဇွန်းသောက်ကြည့်ပါ။ ပြီးမှ ဇွန်းကို အောက်ခံ အချိုရည်ပြားပေါ်မှာ ချထားပါ။ အချိုရည်ခွက်မှာ ဇွန်းတပ်လျက်နဲ့ ဘယ်တော့မှ မသောက်ပါနဲ့။ ပူနေသေးရင် အချိုရည်ခွက်ကို မှုတ်သောက်မယ့်အစား ခဏစောင့်လိုက်ပါ။
သုံးပြီးတဲ့ ဇွန်း၊ ခက်ရင်း၊ ဓါးများ
တခါသုံးပြီးတဲ့ ဇွန်း၊ ခက်ရင်း၊ ဓါးများကို ကိုယ့်ပန်းကန်ဘောင်ပေါ်မှာ ချထားပါ။ အစားအစား ထပ်တောင်းဖို့ လိုအပ်ရင် ပန်းကန်အလယ်မှာ အစားအစာများချထားနိုင်ဖို့ ဇွန်း၊ ခက်ရင်းတွေကို နေရာရွှေ့ပေးပါ။ ဒါမှ အောက်ကို လွတ်မကျပဲ နေမှာပါ။ သုံးပြီးသား ဇွန်းကို သကြားခွက်ထဲ မထည့်ရပါဘူး။ သုံးပြီးသား ဓါးကိုလည်း ထောပတ်ပန်းကန်ထဲကို မထည့်ရပါဘူး။
ဒါကြောင့် နောက်တခါ စားပွဲမှာ ထိုင်တဲ့အခါ သူတပါး စိတ်အနှောက်အယှက်မရှိ စားတတ်သောက်တတ်ဖို့ သတိရသင့်ပါတယ်။ ။
“No Dogs At The Dinner Table” by Susan Queen – from: Beautiful Christian Teen; May- June, 1996.
Labels: Reader, လူမှုရေး, ကျောင်းသုံးဖတ်စာ
လက်ကို ရေနှင့်ဆပ်ပြာဖြင့် ဆေးပါ။ ကူးစက်ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ သန်ကောင်၊ တုတ်ကောင်၊ တုတ်ကွေး၊ အအေးမိ၊ အသဲရောင် အသားဝါ A ၊ ဦးနှောက် အမှေးရောင်နှင့် ကူးစက်တတ်သော ၀မ်းရောဂါများကို တားဆီးပေးနိုင်သည်။
ဘက်တီးရီးယားပိုးကပ်ငြိနေသောလက်ဖြင့် မျက်စိ၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်တို့ကို ထိမိပါက ရောဂါရနိုင်သည်။ တခြားသူများကိုလည်း ကူးစက်စေနိုင်သည်။
အစားအစာပြင်ဆင်ချိန်၊ စားပြီးချိန်နှင့် အိမ်သာအပြန်တို့တွင် လက်ဆေးပါ။ တိရစ္ဆာန်များနှင့် အညစ်အကြေးများကို ကိုင်တွယ်ပြီးသည့်အခါ လက်ဆေးသင့်သည်။ ကလေးကို အညစ်အကြေး သန့်စင်ပေးပြီးသည့်အခါတွင် လက်ဆေးပါ။ ငွေစက္ကူကိုင်ပြီးသည့်အခါနှင့် နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးသည့်အခါများတွင် လက်ဆေးဖို့ကောင်းပါသည်။ အိမ်တွင် မကျန်မာသူရှိလျှင်လည်း မကြာခဏ လက်ဆေးဖို့ အရေးကြီးသည်။
လက်အနှံ့ ၁၅ စက္ကန့်ခန့် ပွတ်သပ်ဆေးကြောပါ။ ပွတ်တိုက်မှုနှင့် ဆပ်ပြာတို့ကြောင့် ပိုးမွှားများ ကင်းစင်စေပါသည်။ ပြီးမှ လက်ကို ရေနှင့် ဆေးပြီး အခြောက်ခံပါ။
အများသုံးရေးချိုးခန်းရှိ ရေခလုတ်နှင့် တံခါးလက်ကိုင်တို့ကို ကိုင်တွယ်သည့်အခါတွင်မူ စက္ကူပျော့ကို သုံးပါက လက်ဆေးရ သက်သာစေပါသည်။
( from “ American Mosaic ” – March 2004: “Importance of Hand Washing” )
Posted by Papa at 11:20 PM
ကြက်ဥတလုံးကို ရေနဲ့ဆေးလိုက်ရင် သဘာဝ အကာအကွယ် ပျက်စီးသွားလို့၊ မကြာခင် ဥပျက်သွားပါတယ်။ လူ့အရေပြားဟာလည်း ကိုယ်ခန္ဓာတခုလုံးအတွက် ဘုရားပေးတဲ့ အကွယ်အကာ တံတိုင်းတမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်က ၀င်လာမယ့် အန္တာရယ်ရှိ ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ တခြားအရာတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ထို့အပြင် ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလည်း ထိန်းထားပေးပါတယ်။
အရေပြားဟာ ကိုယ်ခန္ဓာ အပူအအေးကို ထိန်းပေးပါတယ်။ ပူအိုက်ချိန်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာ အေးစေဖို့ အရေပြားမှ ချွေးထုတ်ပေးပါတယ်။ ချမ်းအေးချိန်မှာတော့ အရေပြားရှိ အပေါက်ကလေးတွေကို ကျုံ့သွားစေပြီး၊ ကိုယ်တွင်းအပူဓါတ်ကို ထိန်းထားပေးပါတယ်။
တခြားသော ကိုယ်အင်္ဂါတွေလိုပဲ အရေပြားမှာလည်း ပြဿနာတချို့ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တွေမှာ ဖြစ်တတ်တာက ၀က်ခြံပါ။ ၀က်ခြံဟာ ဟော်မုန်းဓါတ်နဲ့ အရေပြားမှာရှိတဲ့ အဆီကြိတ်ကလေးတွေ သက်ရောက်ပုံတဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အရေပြားရှိ အဆီပေါက်ကလေးတွေ ပိတ်သွားရာက ဖြစ်ရပါတယ်။
နောက်တမျိုးက အရေပြား ကင်ဆာပါ။ နေလောင်ဒဏ် ကြာရှည်ခံစားရရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပူပြင်းတဲ့ နေရောင်အောက်မှာ အချိန်အကြာကြီး အလုပ်မလုပ်သင့်ပါ။ ဦးထုပ်နဲ့ အကျီတွေ ၀တ်ထားဖို့လိုပါတယ်။
နောက်တမျိုးက အသားမာပါ။ ခပ်ခြောက်ခြောက်ရှိပြီး ယားတတ်ပါတယ်။ ဒူး၊ မျက်ခုံးနဲ့ ဦးခေါင်းတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်က အရေပြားဆဲလ်များ အလွန်အကျွံထုတ်လုပ်ရာမှ ဖြစ်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နှင်းခူဖြစ်ရင်တော့ အရေပြားကို ခြောက်သွေ့စေတဲ့ ဆပ်ပြာကို မသုံးရပါဘူး။ ရေကလည်း အရေပြားကို ခြောက်သွေ့စေလို့ နှင်းခူကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှင်းခူဟာ ကိုယ်အပူချိန် အပြောင်းအလဲ၊ စိတ်အခြေအနေတို့နဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေပါတယ်။
တချို့ အရေပြားပြဿနာတွေက ကိုယ်ခန္ဓာကို ဒုက္ခမပေးတတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အရေပြားမျက်နှာပြင်ကို ထိခိုက်တဲ့အတွက် စိတ်ခံစားမှုကို ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ - ဗစ်တစ်လစ်ဂိုး ( Vitiligo ) ဆိုတာ အရောင်ဆဲလ်တွေ ပျက်စီးသွားတဲ့ ရောဂါပါ။ ဒီရောဂါက အရေပြားကို အရောင် လုံးဝ ပျောက်သွားစေပါတယ်။ တကိုယ်လုံး ဖြူနေမယ်။ ဆံပင်တွေကိုလည်း ဖြူသွားစေနိုင်ပါတယ်။ တကွက်၊ နှစ်ကွက်၊ (သို့မဟုတ်) ကိုယ်တခြမ်း၊ တကိုယ်လုံး စသဖြင့် ဖြူနေတတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတ၀ှန်းမှာ ဗစ်တစ်လစ်ဂိုး ( Vitiligo ) အရောင်ပျက် ဝေဒနာရှင် သန်း ၅၀ ခန့် ရှိပါတယ်။ လူမျိုးမရွေး၊ ကျား/မ မရွေး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ ကိုယ်ခံအားစနစ်နဲ့ ဆိုင်မယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒီရောဂါဖြစ်တဲ့သူဟာ အရေပြား အရောင်ပျက်သွားတဲ့အတွက် စိတ်ထိခိုက်ရမှာပါ။ ဒါကို နားလည်သူတိုင်က စာနာ အားပေးသင့်ပါတယ်။ ။
From: American Mosaic – March, 2004.
Posted by Papa at 8:19 PM
Labels: Health, Reader, ကျန်းမာရေး, သဘာဝ, ကျောင်းသုံးဖတ်စာ
မောရှေ ရဲ့ အံ့ဖွယ် အလုပ်သဘာဝ Amazing Data on Moses
မောရှေနဲ့ သူ့လူတွေ တောအရပ်မှာ လှည့်လည်နေတုန်းကပါ။
လူ ၂ သန်း၊ ၃ သန်းလောက်ကို ကျွေးမွေးကြရတယ်။
နေ့တိုင်း အစားအစာ တန်ချိန် ၁,၅၀၀ ရှိဖို့လိုတယ်။
အဲဒီအစားအသောက်တွေကို နေ့တိုင်း သယ်ယူဖို့ ၁ မိုင်ရှည်တဲ့ ရထား ၂ စီးလိုပါတယ်။
ကန္တာရထဲမှာဆိုတော့ ချက်ပြုတ်ဖို့ ထင်းလိုမယ်။ ထင်းတန်ချိန်က တနေ့ ၄,၀၀၀ နဲ့ ထင်းသယ်ဖို့ ၁ မိုင်ရှည်တဲ့ ရထားတွေ နဲနဲထပ်လိုဦးမယ်။ တောထဲမှာ အနှစ် ၄၀ ကြာတယ်။
ရေလည်း လိုဦးမှာပေါ့။ သောက်ရေနဲ့ သုံးရေအတွက် တနေ့ ရေဂါလံ ၁၁,၀၀၀,၀၀၀ ဂါလံ (ဂါလံ သိန်း ၁၁၀) လိုမယ်။ ရေသယ်ဖို့ မိုင် ၁,၈၀၀ ရှည်တဲ့ ရေတိုင်ကီတွေပါတဲ့ ရထားတစီးလိုပါမယ်။
နောက်တခုက သူတို့ဟာ ပင်လယ်နီကို ညအချိန်မှာ ဖြတ်ကူးကြရမယ်။
ကူးဖြတ်မယ့် လမ်းကျဉ်းကျဉ်းမှာ ၂ ယေက်တတွဲဖြတ်ရင် လူတန်းက မိုင် ၈၀၀ ရှည်လို့ ၃၅ ရက်လုံးလုံး နေ့ရောညပါ ဖြတ်ကြရမယ်။ ပင်လယ်နီကို တညနဲ့ ကူးဖြတ်ဖို့ လူ ၁,၅၀၀ စီ တွဲလျှောက်ကြမယ်ဆိုရင် အကျယ် ၃ မိုင်လိုမယ်။
နောက်ပြဿနာတခုက နေ၀င်လို့ ခရီးတထောက်နားတဲ့အခါ နေရာက အမေရိကန်ပြည်က Rhode ပြည်နယ်ရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံစာ အကျယ်အ၀န်းလိုတယ်။ တနည်းပြောရရင် ၇၅၀ စတုရန်းမိုင် အကျယ်လိုတယ်။ သိပ်ကျယ်တဲ့ စခန်းကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ဒါတွေအားလုံးကို မောရှေဟာ အီဂျစ်ပြည်က ထွက်မလာခင်မှာ စဉ်းစားတွက်ချက်မိပါ့မလား? ကြို တွက်မိမယ် မထင်ဘူး။ မောရှေက ဘုရားသခင်ကို ယုံတယ်။ ဘုရားသခင်ကလည်း သူ့လိုတာတွေကို ဖြည့်စွမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။
ကဲ.. ဒါဆို … သင်လိုသမျှ ဖြည့်စွမ်းဖို့ ဘုရားသခင်မှာ အခက်အခဲရှိပါမလား?
ကိုယ်လျှောက်တဲ့လမ်း ကြမ်းတမ်းခက်ခဲနေရင်လည်း ဆုသာတောင်းပါ။ ကျန်တာတွေကို ဘုရားသခင် မ,စ တော်မူမှာပါ။
Labels: Biography, ခွန်အားယူစရာ, အထုပ္ပတ္တိ, ဆောင်းပါးတို
`ငြိမ်သက်ခြင်းကို မုန်းသောသူတို့နှင့်အတူ ငါ့ဝိညာဉ်သည် ကြာမြင့်စွာနေရပါသည်တကား။ ငါသည်ငြိမ်သက်ခြင်းဘက်မှာနေ၏။ ငါပြောလျှင်မူကား သူတို့သည် စစ်တိုက်ခြင်းငှါ အလိုရှိကြ၏။´ ဆာလံ ၁၂၀း ၆-၇။
“I am for peace: but when I speak, they are for war.” Psalms 120: 6-7.
လူတချို့ အေးအေးဆေးဆေး၊ ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေချင်တယ်။ လူတချို့ကတော့ ရန်လိုတယ်၊ တိုက်ချင်ခိုက်ချင်နေတယ်။
အေးအေးဆေးဆေးနေချင်တဲ့သူတွေဟာ လူအသက်ကို နှမြောတယ်။ အမိဝမ်းထဲက ကလေးငယ်မှအစ၊ ကလေး၊ လူငယ်၊ လူကြီး၊ အဖိုးအဖွါးအထိ တန်ဖိုးထားကြ၊ ကြင်နာကြတယ်။ ပြုစုကြ၊ ကာကွယ်ပေးကြတယ်။
ရန်လိုသူတွေကတော့ လူ့အသက်ကို တန်ဖိုးမထား၊ ကိုယ့်စိတ်ကြေနပ်ဖို့ပဲ ဦးစားပေးကြတယ်။ အမိဝမ်းထဲက ကလေးကို လူမထင်၊ ကလေးငယ်တွေကို မသနား၊ လူငယ်တွေကို လမ်းကောင်းမပြ၊ လူကြီးချင်းလည်း မလေးစား၊ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေကိုလည်း မငဲ့ညှာကြပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် နေရဖို့ တခြားသူတွေကို ထိခိုက်နစ်နာစေကြတယ်။
အေးအေးဆေးဆေးနေချင်သူနဲ့ ရန်လိုသူဟာ အသက်ရှင်ပုံမတူသလို အကျိုးခံစားရပုံလည်း ကွာပါတယ်။
ရျမာရိဘုရင် အာခဇိက ဧလိယကိုဖမ်းဖို့ လူ ၅၀ ကို ဦးဆောင်ရတဲ့ တပ်မှူးကို စေလွှတ်ပါတယ်။ တပ်မှူးဟာ တောင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ ဧလိယကို မြင်တဲ့အခါ - - - `အို- ဘုရားသခင်၏လူ၊ သင်သည်ဆင်းရမည့်အကြောင်း ရှင်ဘုရင် အမိန့်တော်ရှိသည်ဟု ဆို၏။ ဧလိယကလည်း၊ ငါသည် ဘုရားသခင်၏လူမှန်လျှင် သင်နှင့် သင်၏လူငါးကျိပ်တို့ကို လောင်ပါစေ။ ´ ဟု - - - - - ဆိုသည့်အတိုင်း၊ ကောင်းကင်က မီးကျ၍ သူနှင့် သူ၌ပါသောလူငါးကျိပ်တို့ကို လောင်လေ၏။´ ၄ရာ ၁း ၉-၁၀။
ဒုတိယ တပ်မှူးတယောက်ကို ထပ်လွှတ်တော့ - ` ဘုရားသခင်၏လူ အမြန်ဆင်းခဲ့´ လို့ ဆိုပြန်တယ်။ ကောင်းကင်က မီးကျ၍ သူနှင့် တပ်သား ၅၀ သေရပြန်တယ်။
တတိယတပ်မှူးကို လွှတ်တဲ့အခါ - သူဟာ ဧလိယရှေ့မှာ ဒူးထောက်ပြီးတော့ ` အို- ဘုရားသခင်၏လူ၊ ကျွန်တော်တို့ အသက်ကို နှမြောတော်မူပါ´ လို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
ပထမနဲ့ ဒုတိယတပ်မှူးတို့နဲ့အတူ နောက်လိုက်တွေ သေကြရပေမယ့် တတိယတပ်မှူးနဲ့ သူ့လူတွေတော့ ဘေးလွတ်ပြီး၊ ၀မ်းသာကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရန်ရှာသူ၊ စစ်တိုက်ချင်သူမဖြစ်ပဲ၊ ငြိမ်းသက်ခြင်းကို မြတ်နိုးပြီး၊ အများအကျိုးပြုသူတယောက်ဖြစ်ဖို့ လမ်းကြောင်းရွေကြပါစို့။ ။
Pro-life = လူ့အသက်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့ စိတ်သဘော
Pro- choice = ကိုယ့်အကြိုက်၊ ကိုယ့်သဘောကို ဦးစားပေးတဲ့ စိတ်သဘော
Posted by Papa at 7:30 PM
တခါက ပုံပြင်တပုဒ် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ Morocco မော်ရိုကိုနိုင်ငံ၊ Marrakech မာရခဲခ်ျ မြို့စားရဲ့ အိမ်တော်ခန်းမထဲမှာ အငြင်းအခုံတခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရင့်တော်ဝင် မိသားစုထဲမှာ မွေးဖွါးကြီးပြင်းလာသူနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီး မြင့်မြတ်လာသူတယောက်မှာ ဘယ်သူက ပိုကောင်းမြတ်သလဲ? တချို့က ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ ဆုံးမ သွန်သင်ခြင်းတွေက ပိုကောင်းမြတ်တဲ့သူတယောက် ဖြစ်လာစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တခြားသူတွေကတော့ မြင့်မြတ်စွာ မွေးဖွါးလာရမယ်လို့ အခိုင်အမာ ဆိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ မြို့စားကြီးက ငြင်းခုံတဲ့ တဖက်စီတိုင်းအတွက် သက်သေ အထောက်အထား စုဆောင်းဖို့ လူ ၂ ယောက်ကို ခန့်ထားလိုက်ပါတယ်။ ရရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကြည့်ပြီး တလ အကြာမှာ ဆုံးဖြတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
`ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရမယ်´ ဆိုတဲ့ အဆိုဖက်က မကြာမှီမှာပဲ အထောက်အထားရှာဖို့ ခရီးထွက်လာပါတယ်။ တည သူတည်းခိုရာ တည်းခိုခန်းရဲ့ ခုံရှည်တလုံးမှာ ထိုင်နေတုန်း ကော်ဖီတခွက်မှာ လိုက်ပါတယ်။ သူ သိပ်အံ့ဩ သွားတယ်။ ခဏအကြာမှာ အစိမ်းရောင် ကုလားကာ ကွဲသွားပြီး၊ ကြောင်တကောင်ဟာ နောက်ခြေထောက်ပေါ်မှာ ရပ်ကာ လမ်းလျှောက်လာပါတယ်။ ကြောင်ရဲ့ လက်ထဲမှာ ကော်ဖီတခွက်ပါတဲ့ လင်ဗန်းကလေးတခု ပါလာပါတယ်။
သိပ်ထူးခြားတဲ့ ကြောင်ပါလား? သင်ပေးရင် ရတာပဲ။ ဒါဟာ စည်းကမ်းနဲ့ ပညာရေးက ပေးနိုင်တဲ့အရာရဲ့ သက်သေ အစစ်ပါပဲ။
သူက တည်းခိုခန်းပိုင်ရှင်ကို `ခင်ဗျားမှာ၊ သိပ်လိမ္မာတဲ့ ကြောင်တကောင် ရှိတာပဲ။ ကျွန်တော်ကို ရောင်းပါလားဗျာ။´ လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ပိုင်ရှင်က ထူးခြားတဲ့ ကြောင်ကို နှမြောလို့ ငြင်းတယ်။ သူ့ဇနီးကလည်း ကြောင်ကို အတော် သဘောကျနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကြောင်ကို ရမှ ဖြစ်မှာဆိုတော့ ဈေးကြီးပေးပါမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဇနီးသည်နှင့်ပြောဆိုပြီးတဲ့အခါ တည်ခိုခန်းပိုင်ရှင်က သဘောတူလိုက်ပြီး၊ ကြောင်ကို ခြင်းတောင်းငယ်တခုထဲ ထည့်ပြီး ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
ခရီးသွားသူ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ မွေးရာပါထက် ပညာရေးနဲ့သွန်သင်ပြသမှုက ပိုထိရောက်ကြောင်း သက်သေ တွေ့ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်လာပါတယ်။ သတင်းကြားရပြီးနောက် အဲဒီသက်သေကို ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူက လေ့လာဖေါ်ထုတ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ခရီးသွားက ပြောမပြပါဘူး။ ဒါကြောင့်အစေခံတယောက်ကိုစေလွတ်ပြီး အဲဒီအိမ်ကအစေခံများနှင့် စကားပြောခိုင်းပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ကြောင်ရဲ့ ထူးခြားချက်ကို သိသွားပါတယ်။
လအတော်ကြာမှာ မြို့စားကြီး အိမ်တော်ခန်းမထဲ ထိုင်ပြန်ပါတယ်။ နှစ်ဘက်လူတွေ နေရာယူကြပါတယ် “ ကဲ၊ မြင့်မြတ်စွာမွေးဖွားလာတဲ့သူလား (သို့) ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားသူလား၊ ဘယ်သူမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ကြမယ်” လို့ မြို့စားကြီးက ပြော လိုက်တယ်။
ခရီးသွားက သူ့ခြင်းတောင်းလေးကို ဖွင့်လိုက်လို့ ကြောင်ခုန်ထွက်လာတယ်။ ခိုင်းလိုက်တော့ မြို့စားကြီးကို ဦးညွတ်တယ်၊ ပြီးမှနောက်ခြေနှင့် ရပ်ခါ ရှေ့လက်ပေါ်မှာ ဗန်းကိုတင်ရင်း ကော်ဖီခွက်တင်ပေးဘို့ စောင့်နေပါတယ်။ ပြီးမှ ကော်ဖီခွက်ကို မြို့စားကြီးထံ သယ်လာပါတယ်။
သင်ထားတဲ့ အဲဒီပြကွက်ကို လူတိုင်း အံ့အားသင့်သွားတယ်။ ကြောင်က သူ့သခင်ထံ ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ နောက်ထပ် ကော်ဖီတခွက်ကို ဗန်းပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးမှ တဖက်မှာရှိတဲ့ ပြိုင်ဘက်ထံ ပို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ လိမ္မာတဲ့ကြောင်ကလေး လမ်းတ၀က်အရောက်မှာတော့ ပြိုင်ဖက်က အကျီ င်္အောက်က သေတ္တာကလေးကို ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သေတ္တာထဲက ကြွက်တွေကို လွတ်လိုက်ပါတယ်။
ဗန်းနဲ့ကော်ဖီခွက် လွတ်ကျကွဲသွားတယ်။ ပြေးနေတဲ့ ကြွက်တွေရဲ့နောက်ကို ကြောင်က လေးဖက်ထောက် ပြေးလိုက်နေတယ်။ ကြောင်သဘာဝပေါ်လာတဲ့အခါ ပညာသင်ထားတာတွေ အားလုံးပျောက်သွားပါတယ်။ ကြောင်ဖြစ်လို့ ကြောင်လို ပြုမူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
စည်းကမ်းပြသခြင်း၊ မိဘသွန်သင်ခြင်း၊ ဘုရားကျောင်း သွားခြင်းတွေဟာ အပြုအမူများကို၊ တိုးတက်စေ နိူင်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တယောက်လို့ အများကထင်လောက်အောင် ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ စတဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ ရနေနိူင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် အပြုအမူများ၊ အလေ့အကျင့်များဟာ၊ အတွင်းလူကို ပြောင်းလဲမပေးနိူင်ပါ။ လူတိုင်းအပြစ်ထဲမှာမွေးဖွါးလာကြတယ်။ သူတပါးတို့ရှေ့မှာ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းနေပါစေ၊ လူတိုင်း အပြစ်သားများသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ (ရောမ ၃း၂၃ နှင့် ရောမ ၅း၁၂ ) ကိုကြည့်ပါ။ ကောင်းစွာသွန်သင်ပြသထားလို့ တတ်ကျွမ်းပေမယ့်လဲ၊ သူ့မှာ ကြောင် သဘာဝတော့ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ကြောင်တကောင်အနေဖြင့် သူ့မှာ တခါပြန်မွေးဖို့ လိုပါတယ်။
“ မဖြစ်နိူင်တာ” ဟု ဆိုချင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ ကြောင်တကောင်အတွက် မဖြစ်နိူင်ပါ။ သို့သော် သင့်အတွက် ဖြစ်နိူင်ပါတယ်။
သခင်ယေရှုက” ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံရကြမည်” ဟုမိန့်တော်ပါတယ်။ ( ယော၃း၇ ) ဘုရားသခင်၏မိသားစုထဲမှာ မွေးဖွားရမယ်။ ဘယ်လိုမွေးမှာလဲ? သင့်စိတ်နှလုံးကို သခင်ယေရှုခရစ်အတွက် ဖွင့်ဟပြီး သင်၏ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံခြင်းဖြင့် ရနိုင်ပါတယ်။
အခုလက်ခံလိုက်မလား? ဘုရားသခင်ထံ ယခုလိုရိုသေစွာ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဘုရားသခင် ….. ကျွန်တော် အပြစ်သားပါ။ အကယ်ခံဖို့ လိုပါတယ်။ သခင်ယေရှုဟာ ကားတိုင်မှာ အသေခံပြီး (၃) ရက်မြောက်သောနေ့မှာ ထမြောက်တာကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ကျွန်တော့် အပြစ်အကြွေးတွေ ပေးဆပ်ခဲ့တာကို ယုံကြည်ပါတယ်။ အပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်မူပါ။ ကယ်တင်ဖို့သခင်ယေရှုကို အခုအားကိုးလိုက်ပါပြီ။ ဘုရားသားဖြစ်စေပါ။ သခင်ယေရှုနာမ၌ ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။